Dzimba Dzakasiyana-siyana Dzakatengeswa - Dzimba Dzepasi Dzepasi Dzepasi Dzose | Special Finds
Brenda Thompson - Nyanzvi yeZakakosha yePurisa uye Real Estate Broker
Special Kuwana? Chii Chinotsanangura Kutsvaga Kwakakosha?
Kutengesa Imba Yenyu
Dzimba Dzakasiyana-siyana Kutengesa Mazano
Nyora Imba Yakasarudzika!
Zvimwe Zvivako Zvakatengeswa
Mubhedha neKudya kwekuseni kana AirBnB
Makamba uye Chateaus Ari Kutengeswa
Pasi Rakachengetedzwa, Bermed kana Dzimba dzepasi
Historic Homes uye Cottages
Mabhiza Mahosi uye Mapurazi
Log Cabins & Dzimba dzeRustic
Kuzvikwanira, Kugadzirira uye Kunze-Grid Dzimba
Zviitiko zvemazuva ano / Eclectic Homes
Yakasiyana Nemvura Waterfront Homes
Zvimwe Zvimwe Zvisingawanisi Zvitengesi Zvokutengesa
Nyika & Acreage
DZIMWE DZIMWE DZIMBA DZOKUDZIDZA
Zvivakwa zvinomira kunze muRuzhinji
Vanopfuura 65,000 Vakasarudzika Vatengi Vekumba Vanoda Kuona Yako Pfuma
$ 40 / Mwedzi
Brenda! Izvi zvakanaka! Ndinokutendai nebasa renyu uye kutarisisa kune zvakadzama. Kurongeka kukuru uye fomati. Izvi zviri pamusoro uye kupfuura zvandaitarisira.
Jane M. (Inotengeswa neMuridzi)
Ndatenda! Saiti yako inonyatso kuunza vatengi vakasarudzika! Chikomborero chakadini!
Beth P (Inotengeswa neMuridzi)
Mangwanani akanaka Brenda, Takatengesa imba yedu! Yakazara mutengo mari haupi zvinokanganisa chii-saka-chero! Ndiri kufara kwazvo, handigoni kutanga kukuudza. Ndinotenda zvese zvamakaita. Ini ndinonyanya kukurudzira basa rako uye saiti.
Patricia E. (Ari Kutengesa neMuridzi)
Wadiwa Brenda, Wakaenda pamusoro penzvimbo yebasa. Yakanyanya kufadzwa nebasa rako pachako nekubata ...
Elizabeth S (Ari Kutengesa naiye Muridzi)
Chakanakisa kushambadza - Wow! Ndatenda, Brenda, newadhi rako!
Walter (Inotengeswa neMuridzi)
Ini ndanga ndichida kungoti ndatenda nerubatsiro rwenyu rwese. Tsananguro yako yeiyo chivakwa yakaunza vazhinji vangangove vatengi mumba. Saka vanhu vazhinji vakazviona uye zvakatengeswa makumi maviri pamusoro pemutengo wekubvunza! Ndichiri kugara ndichifonerwa. Ini ndinofunga tsananguro yako yakabatsira mukuwana pamusoro-kubvunza kupihwa.
Pat (Inotengeswa neMuridzi)
Inotaridzika kunge yakanaka. Iwe wakaita basa rinonakidza. Ndakafadzwa kwazvo. Handikwanise kukutendai zvakakwana nekuedza. Handikwanise kunyatsofara.
Pfuma (Inotengeswa Nemuridzi)
Ini handikwanise kukutendai zvakakwana nerubatsiro nerutsigiro rwamakapa munzira. Dai usiri iwe handizive kuti ndingadai ndakasvika kusvika ikozvino muchiitiko ichi. Makandipa kurudziro yakawanda mangwanani-ngwanani, uye pese pandinokudanai maipindura. Izvi zvaireva nyika kwandiri.
Monique (Inotengeswa Nemuridzi)
Wazviita!!! Iwe uri Master Marketer. Mhinduro yacho yakakurumidza! Unogona kudzidzisa kosi pakushambadzira Brenda! Ndingadai ndiri wekutanga mumutsara.
Brenda, iwe WAKAITA ZVINOSHAMISA mune rondedzero yacho. NDATENDA SHOKO - rako "chitendero.
N. Kuhn neMhuri (Inotengeswa neMuridzi)
Chaizvoizvo, unomira kunze senyeredzi inopenya maererano nehunyanzvi, kugona, kushingairira, uye hanya. Ndinoda kutengesa imba kuburikidza newe nekuda kwezvikonzero izvi. Shuwiro yakanakisa!
Fran G (Iri Kutengeswa neMuridzi)
Ini ndinongoda nzira yaunowisa mapeji ako pamwechete. Iwe unotora nguva yekunyatsoverenga uye kunzwa uye tora iwo akakwirira mapoinzi. Izvi hazviwanzo uye zvinokuita wakasarudzika! Takakomborerwa kuva newe. Ndatenda zvikuru ~
Kutenda L (Keller Williams Mumiriri)
Unotyisa! Wangu mutengesi akada zvawakaita!
Meg L. (Edina Realty Mumiriri)
Ndatenda nekuvimbika kwako uye nebasa rawakashandisa pafaira rangu.
Guy L. (Inotengeswa neMuridzi)
Zvekare iwe unoita zvinoshamisa basa!
Ini ndinotenda chaizvo kunyatsoteerera kwedu kune yedu zvinyorwa newe 🙂
Angela B (Inotengeswa neMuridzi)
Inotaridzika yakanaka senguva dzose!
Kutenda L. (Keller Williams Mumiriri)
Aya anga ari maitiro akareruka uye ndinotenda rubatsiro rwenyu rwese!
Dustin B (Mumiriri)
WOW! Ndinoshamiswa nezvakabuda. Ndatenda zvikuru!
Imba yedu yakarongerwa kuvhara neChishanu! You Ndinokutendai nezvose zvamakaita. Zvakandibatsira nekundiudza kwako kuti "rega uende". Zvakanga zvakaoma!
Bethany M (Inotengeswa neMuridzi)
Handina kumbotarisira kuti iwe ushande nesimba iri kuti chii zvakandibhadhara. Ndatenda. Iwe uri kambani yakasarudzika.
Sam (Inotengeswa neMuridzi)
Mhoroi, Brenda, ini ndaida kukuzivisa iwe kuti tinazvo akabvuma kupihwa pamba pedu! Ndatenda kwazvo nebasa rako rakaoma kushambadza iyo pfuma kune nyika!
Carl (inotengeswa nemuridzi)
Inotaridzika zvikuru Brenda uye yakapfuura zvandaitarisira. Ndinofara ndaona webhusaiti yako!
Matt (Zvirinani Dzimba Realty Mumiriri)
Ona Maimba Edu Akasiyana-siyana Kutengeswa
1,529Masoka epa square
4 Yakazara, 1 HafuBhati
5,432Masoka epa square
Red Barn Imba & Guesthouse
4 Yakazara, 2 HafuBhati
3,408Masoka epa square
Kumba Rehab Mukana
1 Yakazara, 1 HafuBhati
2,800Masoka epa square
Zvinoshamisa Waterfront Luxury - Eco-Hushamwari
5,500Masoka epa square
Yakashandurwa Barn Imba
3,800Masoka epa square
Imba yePrepper muCanada
2000Masoka epa square
Nhoroondo Firehouse Commerce Mukana
1 Yakazara, 2 HafuBhati
2,600Masoka epa square
Tangi Yemvura Inogoneka Imba
Round 32' kureba x 28' base dhayamitaMasoka epa square
Nharembozha USVI Mvura yepamusha paMagens Bay
10,561Masoka epa square
Yakashandurwa Sanctuary Imba
3 Yakazara, 1 HafuBhati
7000Masoka epa square
Ona Yose Imba Yedu Yakasiyana-siyana Kutengeswa
Kutengesa Imba Yenyu Yakasiyana?
Shambadza Pfuma Yangu - $ 40 / Mwedzi
Gadzira Chirongwa Chetsika Kwandiri
Iye zvino unogona kutumira ako akasarudzika zvivakwa pane yedu saiti ye $ 40.00 pamwedzi!
Kana, tinogona kuvaka purogiramu yekutengeserana yako iwe!
Special Inotsvaga inokamura zvivakwa neakasarudzika manyorerwo. Kana iwe uchida kutengesa yako isina kujairika chivakwa ichave yakanyorwa uye zvakazara kushambadzirwa pano - kana - kana iwe uchida kutenga, tinya pamaitiro epfuma iyo inokunakidza iwe.
Yakakosha "Inowana ..." - Tsvaga Dzedu Dzakasarudzika Dzimba Dziri Kutengeswa nePfuma Chikamu
Iwe Une Imba Yakasarudzika Yaungade Kuona pane Yedu Saiti?
Tichakurudzira Kunze Tsvuku Kapeti Iwe!
Sei ndakatanga Special "Inowana ..."?
Pfungwa yeSpecial "Inotsvaga ..." yakatanga kubva pane zvakaitika kwandiri semutengi, uyezve semutengesi - nguva refu ndisati ndava real estate agent.
Kufanana newe, ndine dzimba dzakawanda dzakasarudzika dziri kutengeswa. Semutengi, ndaishushikana kushanda nemakambani echinyakare edzimba aisanzwisisa kuti ndanga ndichitsvaga chivakwa chakasarudzika, saka vakaramba vachindiratidza zvimiro zvakajairika uye zvakajairika zvinokodzera mukati mevharanda dzakamanikana dzeMLS yavo yemuno.
Pandakagadzirira kutengesa dzimba dzangu dzakasarudzika, ndakaona kuti mafemu echinyakare aishaya ruzivo, hunyanzvi, uye ruzivo rwekutengesa zvivakwa zvisina kujairika, saka, ndakatora makore angu ehunyanzvi hwekushambadzira akawanikwa saMutungamiriri weKushambadzira weNew York Stock Exchange, akabatanidzwa izvi neine rezinesi rezvivakwa yekuzadza iyo inodiwa-gap muindasitiri yezvivakwa, uye voila! Yakakosha "Inowana ..." yakazvarwa!
Isu tinoshambadza nekusimudzira zvivakwa zvisina kujairika nedzimba dzakasarudzika yekutengesa.
Ngatibatsirei imi. Isu tiri vashambadziro venzvimbo dzisina kujairika dzimba. Isu tiri zvakare Realtors yakatsaurirwa kuwana yakasarudzika dzimba inotengeswa.
Ngatitengese Zvisikwa Zvako
Shandura chimiro chako chemugove - Rega Special "Inowana ..." rubatsiro. Tichasvika pakuziva imba yako - nyora pamusoro payo uchishandisa mazwi chaiwo acharatidza unhu hwahwo hwakasiyana. Tichazogadziridza "Property Story" uye mushandirapamwe wekutengeserana wakagadzirirwa kuti iwe ucherekedze uye kuwana mutengi akakwana achitsvaka imba yakafanana neyako.
Biophilic Dhizaini - Kuiwedzera Iyo Yako Imba
Kutumira Midziyo Yemidziyo
Ita zvishoma kutsvaga kweShoko rako "Tsvaga ..."
Copyright Copyright © All Rights Reserved © 2016